Igbo, John: Lesson 059 - Ekwensu, onye na-egbu ọchụ na onye ụgha (Jọn 8:37-47) | Waters of Life
Home – Igbo – John - 059 (The devil, murderer and liar)
f) Ekwensu, onye na-egbu ọchụ na onye ụgha (Jọn 8:37-47)
37 Mu onwem matara na nkpuru Abraham ka i bu, ma i nāchọ uzọ ib͕um, n'ihi na okwum adighi-ahu nime gi. 38 Ana m ekwu ihe m hụrụ n'ebe Nna m nọ; na ị na-eme ihe nke na ị hụrụ na nna gị. "39 Ha wee zaa ya," Nna anyị bụ Ebreham. "Jizọs wee sị ha," Ọ bụrụ na ị bu umu Ebreham, unu galu nke Ebreham.
Ndi Juu weere onwe ha dika nkpuru nke Ebreham, wee chee na n'ihi nke a, njikọ nke ha na Nna nke okwukwe ha ketara nkwa ndi Chineke nyeworo orù Ya n rubeisi.
Jizọs ajụghị ihe ùgwù nke mmekọrịta a, ma o wutere ya na ụmụ Abraham enweghị mmụọ nna ochie. Nke a nyere ya ike ige nti olu Chineke na idebe okwu Ya. N'ihi ya, ha mechiri obi ha n'okwu Jizọs, okwu ndị a abanyeghị n'obi ha ma ọ bụ mee ka ha nwee ìhè. Ha nọgidere na-amaghị ama na ndị na-ekweghị ekwe.
Okwu Kraist abaghi nkpuru nime ìgwè ah di icheiche karia ig na icho asi. O yikarịrị ka ihe ka ọtụtụ n'ime ha anọghị n'ebumnobi ahụ igbu Jizọs, mana, Jizọs kpughere ihe ndị dị n'obi ha ma mara na ịkpọasị bụ ịmalite igbu ọchụ. N'oge na-adịghị anya, ha ga-eti mkpu "Kpọgide Ya n'obe, kpọgide Ya n'obe" (Matiu 27:21-23; Jọn 19:15).
Ebrehem nuru olu Chineke ma nerube isi na nti Ya. N'ụzọ dị ịtụnanya, ọ bụghị nanị na Jizọs gere ntị n'olu Nna ya mgbe niile kama ọ hụrụ ọrụ Chineke na ebube ya. Ngosipụta ya zuru oke, na-esite n'aka mkpakọrịta siri ike na Chineke. Jizọs bụ Mmụọ si na Mmụọ Ya na ịhụnanya si ịhụnanya Ya.
Ma ndị Juu kpọrọ asị Onye mụrụ nke Nna. Nke a gosipụtara na ha esiteghị n'ezi Chineke ahụ. Isi iyi nke echiche ha bụ ihe ọzọ karịa eluigwe. N'oge a nke arụmụka, Jizọs gbalịrị ịdọrọ ha iche n'echiche banyere "ndị nna" ha. Ọ bụghị Ebrehem.
40 Ma ub͕u a unu nāchọ uzọ ib͕um, bú madu nke gwaworo unu ezi-okwu, nke m'nuru site na Chineke. Ebreham emeghị nke a. 41 Unu onwe-unu nālu ọlu nna-unu. Ha we si ya, Ayi amughi ayi site n'ikwa-iko. Anyị nwere otu Nna, Chineke."
Ndị Juu kpọrọ okwu Kraịst asị n'ihi na o boro ha ebubo na ha na mmụọ Abraham adịghị. Obi ike ha na ụmụ ha sitere n'aka Abraham bụ ntọala nke okwukwe na olileanya na nkwanye ùgwù ha. Ntre, didie ke Jesus ama okụt ubiere ye ufan Abraham ye ndisio enye.
Jizos gosiputara ha na oru Abraham bu nrube isi n'okwukwe na Chineke mgbe o rapuru dika omuma. O gosipụtara ntukwasi obi ya n'ebe Chineke nọ n'ikwesị ntụkwasị obi mgbe ọ na-achụ àjà iji chụọ nwa ya Aịzik n'àjà, dika ịdị umeala n'obi o gosiri n'ebe nwanne ya nwoke bụ Lot nọ. Ma ndị Juu gosipụtara nkwenye ha, nnupụisi na enweghị okwukwe na mmụọ ha megidere Kraịst. Ya mere, ha na-agbagha eziokwu ahụ nke na-eguzo n'etiti ha ma ọ bụ na ha egeghị ntị n'olu Chineke site n'aka ya. Jisos abiagh dika Okpara Chineke nke ndi mo-ozi juputara n'ebube, kama dika onye di mfe nke nwere nani okwu nke ya. Ọ dịghị amanye ndị mmadụ ịnakwere Oziọma ya kama ọ bịara igosi ịhụnanya, amara na aha Chineke. Ha jụrụ ozi ọma a na nlelị, n'ihi ya, ha tinyere echiche nke igbu ya. Nke a dị iche na àgwà na omume Abraham; o nuru, rube isi, biri ma mee dika mkpughe Chineke si di.
42 Ya mere Jisus siri ha, Ọ buru na Chineke bu nna-unu, unu gāhum n'anya: n'ihi na esim n'ebe Chineke nọ bia. N'ihi na abiaghm n'Onwem, kama O ziterem. 43 Gini mere i nāmataghi okwum? Maka na ị pụghị ịnụ okwu m.
Jizos gosiputara ndi Ju na Abraham abugh nna ha, ya mere o duuru ha ka ha mata aha nna nke ha nebe. Dị ka ọ dị, ya mere ha nọkwa.
Ndị Juu chere na Jizọs mere ka ọdịiche dị n'etiti ya na ha pụta ìhè. Ha zaghachiri na ha abụghị ụmụ nke ịkwa iko n'adịghị ka ndị Moab na Amọn bụ ndị a mụrụ site na ịbịakwasị (Jenesis 19: 36-38). Ha abughi kwa ndi ndi Sameria dika ha siri na Chineke bu Nna ha na-adabere n'osisi 4:22 na Diuterọnọmi 32: 6 nakwa dika Aisaia 63:16. Mgbe Jizọs kwuru na Chineke bụ Nna ya, ha kwuru na ọ bụ Nna ha dịka Akwụkwọ Nsọ si kwuo. Nke a bụ ozizi nke okwukwe ha nke ha gbasiri ike ma taa ahụhụ. Ma àmà ha bụ ụgha.
Jizọs gosipụtara obere oge na ha na-aghọgbu onwe ha. O kwuru, sị, "Ọ bụrụ na Chineke bụ Nna unu, unu gaara ahụ m n'anya, n'ihi nà Chineke bụ ịhụnanya agaghị akpọ asị, ọ hụrụ Ọkpara ya n'anya nke sitere n'aka Ya, Ọkpara ahụ na-ebukwa ihe dị mkpa." Jisos esiteghi na Nnam rue ugbua, ma rube isi na Ya dika onye nerube isi.
Ya mere Jizos siri ndi Ju, Gini mere unu onwe-unu nātughi asusu di iche iche n'irum, ọ bughi asusu di iche iche ka M'kwuworo? Jizọs zara ajụjụ nke ya, sị ndị iro ya, "I nweghị ike ige ntị, ị bụghị onye nweere onwe ya ma ọ bụ ohu, ndụ ime mmụọ gị furu efu." I yiri onye ntị chiri na-anụghị oku ahụ."
Ezigbo nwanna, olee ihe ị na-anụ na ime mmụọ, ị na-anụ okwu Chineke n'obi gị? Ị na-anụ olu Ya na-achọ ịsacha ma dezie ihe dị n'ime gị? Ka ị dị mpako na ntị chiri, n'ihi na mmụọ dị iche iche ejidewo gị? Ị na-arụ ọrụ maka Chineke na ike nke Oziọma ahụ ma ọ bụ mmụọ ọjọọ na-ebi n'ime gị, ị na-agbaso ntụziaka ya?
Olee otú Jizọs si gosi ndị Juu na ha abụghị ụmụ Abraham?
Page last modified on March 05, 2020, at 06:14 PM | powered by PmWiki (pmwiki-2.2.109)